नियमित रुपमा सेक्स गर्ने महिला कसरी चिनिन्छन ? यस्तो छ रोचक तथ्य |
नियमित रुपमा सेक्स गर्ने महिला कसरी चिनिन्छन ? यस्तो छ रोचक तथ्य
महिलाहरु सुन्दरताका धनी हुन्छन् । उनीहरुमा रहेको सौन्दर्यको तारिफ धेरैले गर्न चाहन्छन् जसबाट उनीहरु नै प्रफुल्लित हुन्छन् । अझ कसैले त महिलाको सुन्दरता नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो भनेर पनि अथ्र्याएका छन् । विवाहित महिला र अविवाहित महिलामा केही फरकपना पाउन सकिन्छ तर त्यो जान्न अलि नियालेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
एउटा अनुसन्धानले नियमित रुपमा यौनसम्पर्क गर्ने र नगर्नेबीचमा एउटा निष्कर्श पनि निकालेको छ । त्यस निष्कर्शलाई बुझ्दा कुन महिलाले नियमित रुपमा सेक्स गरेकी हुन्छिन् भन्ने कुरा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । नियमित सेक्स गर्ने महिलाको नितम्ब कम सेक्स गर्ने महिलाको भन्दा तुलनात्मक रुपमा केही ठूलो हुन्छ ।
यो अनुसन्धान सेक्स गरिरहने र सेक्स नगरेका महिलाको नितम्ब मापन गरी गरिएको हो । पुरुषको तुलनमा माहिलको नितम्ब भने ठूलो नै हुन्छ । तर विवाहित महिलाको भने अविवाहितका तुलनामा सानो हुन्छ । जसको नितम्ब ठूलो हुन्छ उसलाई बच्चा जन्माउन भने सहज हुने गर्दछ ।